IES ခြင်းတောင်းကဘာလဲ? အဘယ်ကြောင့်ဤအမည်ကို ??? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
IES ခြင်းတောင်းကဘာလဲ? အဘယ်ကြောင့်ဤအမည်ကို ???
КЭС-БАСКЕТ (Чемпионат школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ")
В 2007 году проект Чемпионат Школьной баскетбольной лиги КЭС — БАСКЕТ был запущен в Пермском крае, как краевой. Спонсором лиги выступила российская компания ЗАО Комплексные энергетические системы, а Школьная баскетбольная лига получила титульное название КЭС-БАСКЕТ. Проект, помимо спортивной составляющей, был в первую очередь направлен на вовлечение как можно большего количества школьников в занятия физкультурой и спортом. Перед началом реализации проекта организаторами были проведены консультации с различными подразделениями Министерства образования РФ, спортивными и медицинскими специалистами, в результате чего была предложена модель проекта, результатом реализации которой стала бы массовая вовлеченность школьников в занятия баскетболом, их естественное стремление к совершенствованию уровня спортивного мастерства и как следствие — систематические занятия спортом.
ကျောင်းသားအကြား -propaganda ကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများသဟဇာတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး,
-profilaktika လျစ်လျူရှု, အိုးမဲ့အိမ်မဲ့, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, လူငယ်သက်ငယ်ပြစ်မှု;
-dalneyshaya ယေဘုယျအားဖြင့်ဘတ်စကက်ဘောအားကစားပုံမှန်အလေ့အကျင့်လုပ်ဖို့ကျောင်းသားများကိုဆွဲဆောင်, ဘတ်စကက်ဘော popularize;
ကျောင်းတစ်နှစ်ကာလအတွင်း -sistematizirovanny အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်စဉ်ကို;
လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများများအတွက် -motivirovanie ကျောင်းသားများကို;
ကျောင်းကပြိုင်ပွဲတစ်စုစည်း system ကို -Create ။
ရာသီ 2009 2010 နှစ်များတွင်။ အဆိုပါချန်ပီယံကျောင်းအသင်းဘတ်စကက်ဘောအသင်းများကိုရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း 140 ၏ 000 12 000 35 အဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့သည်။ (အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ခြေလှမ်းအပါအဝင်) ပြိုင်ဘက်၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်က 1 117 000 ငယ်ရွယ်ဘတ်စကက်ဘောကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါချန်ပီယံရှစ်ကျောင်းဘတ်စကက်ဘောလိဂ် IES တောင်း၏ပဉ္စမနှစ်ပတ်လည်ရာသီပါဝင်သူတစ်ဦးစံချိန်တင်အရေအတွက်ကဖြစ်ခဲ့သည်: 16 500 ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနှင့်မွန်ဂိုလီးယားသမ္မတနိုင်ငံ 50 ဒေသများထံမှတထောင်အကြံအဖန်တွေချည်းကျောင်းကသင်းယှဉ်ပြိုင်၌၎င်း, အောက်ဘတ်စကက်ဘော၏လက်ကိုယူသောသူသည်ငယ်ရွယ်ဘတ်စကက်ဘောကစားသမားများ uchte intraschool ဇာတ်စင်အရေအတွက်ကိုမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ စိတ်ချလက်ချအဆိုပါ 1 500 000 ချဉ်းကပ်သည့်ချန်ပီယံရှစ်၏ auspices ။
အဆိုပါအဖွဲ့ချုပ်၏ဂုဏ်ထူးဆောင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ထူးချွန်ဆိုဗီယက်ဘတ်စကက်ဘောကစားသမားအိုလံပစ်ချန်ပီယံနှစ်ကြိမ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံလေးအချိန်ဥရောပချန်ပီယံ, ဆိုဗီယက်အက်စ်တစ်ဦးက .Belov တစ်မျိုးစုံချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သည်။
Perm အတွက်32013 အောက်တိုဘာလအက်စ်ချစ်ရာသခင်၏ 70 နှစ်ဘဝအပေါ်အနိစ္စရောက်လေ၏။
Без деятельного участия, профессионализма, высочайшего авторитета Сергея Александровича не только Школьная баскетбольная лига "КЭС-БАСКЕТ",но и весь советский и российский баскетбол, спорт не стали бы такими заметными явлениями.
ဆ၏ရာသီ 2013-2014 ။ : http://www.kes-basket.ru/?season=2013docs
Школьная баскетбольная лига "КЭС-БАСКЕТ".
Posted in, အခွားသောအားကစားများ
64 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,285 စက္ကန့်ကျော် Generate ။